စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုပ်စက်ရုံ
Axis လေးစက်ရုပ်စီးရီးလေး ၀ င်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ100B-230 100KG လေးဝင်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ25B-180 25KG လေး ၀ င်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ15B-140 15KG အလိုအလျောက်ကိုင်တွယ်စက်ရုပ်၏အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း: 1. စက်ရုပ်တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းသည်ကီလိုဂရမ်များစွာမှကြီးမားသောပမာဏအတိုင်းအတာရှိသည်။ ရာဂဏန်းကီလိုဂရမ်မှ, ၂။ ပြေးမြန်နှုန်းသည်မြန်။ ညှိနိုင်သည်။ ၃။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရှုပ်ထွေးသောကိုင်တွယ်ခြင်း၊ 4. မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် s ...
Six Axis စက်ရုပ်စီးရီးခြောက်ငလျင်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ50A-270 （100A270） 50KG ခြောက် ၀ င်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ06A-090 6KG ခြောက် ၀ င်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ10A-160 10KG ခြောက်ဝင်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ20A-180 20KG အလိုအလျောက်ကိုင်တွယ်စက်ရုပ်၏အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း: 1. အဆိုပါတင်ခြင်း နှင့်စက်ရုပ်ချအများအပြားကီလိုဂရမ်ကနေရာပေါင်းများစွာသောကီလိုဂရမ်မှကြီးမားသောဝန်အကွာအဝေးရှိပါတယ်; ၂။ ပြေးမြန်နှုန်းသည်မြန်။ ညှိနိုင်သည်။ ၃။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလုပ်ဆောင်မှု၊ ရှုပ်ထွေးသောကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်သည်။
ဂဟေဆော်စက်ရုပ်ဂဟေဆော်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ06C-180 ဂဟေဆော်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ06C-144 ဂဟေဆော်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ06C-160 ဂဟေဆော်စက်ရုပ်စီးရီး JZJ06C-200 အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်းဂဟေဆော်စက်ရုပ်သည် (စက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပက်ဖြန်းခြင်းအပါအဝင်) ဂဟေဆော်သောစက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ Standardization အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (ISO) ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရစက်မှုစက်ရုပ်သည်စံဂဟေဆော်စက်ရုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ စက်ရုပ်သည်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိသော၊